အခမဲ့သကြားမာမီဝက်ဘ်ဆိုက်, သကြားတတ်ကြဘူးရဲ့ & App ကိုခြိနျးတှေ့သကြားကလေး
အခမဲ့ 10,000 + သကြား Mama ရဲ့ & 60,000 + သကြားကလေးသူငယ်များ Join! ယခုဝင်မည်
သကြား Mama ရဲ့ & App ကိုချိန်းတွေ့ကလေးသူငယ်များ
သကြား Mama ရဲ့မေတ္တာကိုအခမဲ့
သကြား Mama ချိန်းတွေ့
လျှို့ဝှက်အစီအစဉ် & သကြားချိန်းတွေ့
သကြား Mama Arrangement
အကောင်းဆုံးသကြားတတ်ကြဘူးဆိုက်ကို & App ကို
သကြားတတ်ကြဘူး App ကို
login / Up ကို Sign
Login နှင့်သကြားကလေး Arrangement ရှာ Start
100% အခမဲ့သကြား mama ချိန်းတွေ့ site ကို
Craigslist တွင်တစ်ဦးကသကြားတတ်ကြဘူး Find စေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အမျိုးသမီးများနေ့ကျော် 40 သည်ချိန်းတွေ့သိကောင်းစရာများ
သကြား Mama သကြားကလေးသူငယ်များ / သကြား Boys ရှာ
Ebenezer ဖီ sam on သကြား Mama နှင့်အတူအစီအစဉ်ရှာသကြားကလေးသူငယ်များ!
Jaden on သကြား Mama နှင့်အတူအစီအစဉ်ရှာသကြားကလေးသူငယ်များ!
HSC - အဒ်မင် on သကြား Mama နှင့်အတူအစီအစဉ်ရှာသကြားကလေးသူငယ်များ!
သငျသညျအရအဆိုပါအဟောင်းတွေ, ပိုခက်ခဲကြောင့်သင်နှင့်အတူညှိတက်နိုင်ထင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့မှဖြစ်လာသည်။ သကြား mama ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်ပွဲ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထားပြီးသော်လည်းသင်သည်မည်သည့်ခရီးရတဲ့ကြသည်မဟုတ်ကဲ့သို့သေးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကပုံရသည်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင်, ကွာရှင်းကိုမကျေနပ်နှင့်သင့်ဦးစားပေးတစ်ဦးပွဲစဉ်ကိုရှာဖွေလျော့နည်းဖွယ်ရှိနေကြသည်။ ဤတွင် 40 ပြီးနောက်မည်သူမဆိုများအတွက်အရေးကြီးသောချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များတချို့ရှိနေပါတယ်;
ဒါဟာအသိုင်းအဝိုင်းပန်းခြံဒါမှမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုမှဦးဆောင်သောဘားမှာစကားလက်ဆုံကိုချိုးဖျက်ဖို့တဖြည်းဖြည်းရှားပါးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်း? လူတိုင်းအတွက်အွန်လိုင်းင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပါပဲ။ သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အသစ်ဖြစ်ကြပါလျှင်သကြားတတ်ကြဘူးအွန်လိုင်းပေါ်တယ်ကောင်းသောအကူအညီနဲ့၏နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ 40s နေနှင့်ဖြစ်ကောင်းသင့်ထက်အသက်ငယ်သူတစ်ဦးဦးထက်ပိုအတွေ့အကြုံရှိသည်။ သငျသညျတော်တော်ကောင်းကောင်းသင့်ရဲ့အကြိုက်နှင့်မကြိုက်သတိထားမိနှင့်ဂိမ်းများသို့မဟုတ် Chase လူတွေကိုကစားရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏တာဝန်ခံအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့တာဝန်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
မတ်တပ်ရပ်-offish standout Be နှင့်မ
ဤသည်သင်တစ်ဦးသကြား mama ချိန်းတွေ့ပေါ်တယ်အပေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ကိုအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမရရှိနိုင်အများအပြားရွေးချယ်စရာဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သငျသညျ standout ဖြစ်ခြင်းနှင့် Stand-offish ဖြစ်ခြင်းမတစ်ဦးအထင်အမြင်လုပ်နေပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ flirty Be ပေမယ် clingy ဖြစ်ပါဘူး။ စပ်စုဖြစ်ပေမယ့်အပူတပြင်းဖြစ်ပါဘူး။
ဒါဟာဇီဇာဖြစ်အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သဘောတူညီချက်အနိုင်အထက်သိကြရမည်ဟုအရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျအခြို့သောရုပ်ရှင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် Now ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့နေ့စွဲ, ထို့နောက်ကသဘောတူညီမှုအနိုင်အထက်ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ ချိန်းတွေ့၌သင်တို့ကိုမသက်မသာဖြစ်စေပိုပြီးမြင်သာထင်သာသူမြားကိုစဉျးစားကွညျ့အခါထွက် back ဖို့ကိုငါသိ၏။
သင့်ရဲ့ type ကိုအတိတ်ကွညျ့ရှု
လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ချိန်းတွေ့အမျိုးအစားများနှင့်ဦးစားပေးရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ 40s ဝင်သောအခါသို့သော်သင်မယ့်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ type ကိုကျော်လွန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါနားလည်သဘောပေါက်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ဥစ္စာနှင့်သေးသောသူတို့နှင့်အတူကောင်းစွာသင်ညှိ၏ကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးစီးပွားကိုင်ပါဘူးပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဖြစ်ကြသည်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အထက်တွင်သူတို့ရဲ့ 40s ရှိလူများအဘို့အချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုသင်ဖတ်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှင့်သင့်ချိန်းတွေ့ရာသီအတွက်အကောင်းတစ်ဦးမှတ်ချက်ယူပါ။
အပေါ် Posted စက်တင်ဘာလ 5, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ Harsimran KaurTags: သကြား mama ချိန်းတွေ့, အွန်လိုင်းသကြားတတ်ကြဘူးမှတ်ချက် Leave on Dating Tips For Women Over 40
ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေ "ဒါဟာသင်တစ်ဦးပြည့်စုံပြဌာန်းခွင့်ရစေနိုင်ကြသည်တဲ့အခါမှသာပါတယ်။ " ဖြစ်ပါသည်
စာရင်းအောက်တွင်သင်ချိတ်-up, တဖန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဖြစ်စေမ, သင်ပြောပြနိုင်ရာကနေတဆင့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်;
1 ။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်, စိတ်, စိတ်ဝိညာဉ်ဖော်ထုတ်ထားခဲ့ကြသည်။
ကလိုပဲသို့မဟုတ်မ, မဟုတ်တဦးတည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြန်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အတိတ်ဆက်ဆံရေးမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်လိုအပ်ပါမည်။ သင်ကအောင်မြင်ပြီးတာနဲ့သကြားတတ်ကြဘူးချိန်းတွေ့ site ကိုသင့်ရဲ့ဦးစားပေးအပေါ်အခြေခံပြီးမရေမတွက်နိုင်သောပွဲအားဖြင့်သင်တို့ကိုအစေခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်ကကွာရှင်းဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးအိမ်ထောင်ဖက် "ကွယ်လွန်သွား" မှကိုကျော်ရရန်လိုအပ်သည်။
2 ။ အပြီးအစီးလျစ်လျူ။
မေတ္တာနှင့်မုန်းတီးမှုတစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု - သူတို့ကဘုံတစ်ခုခုရှိသည်။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပြင်မရှိခြင်းစိတ်ခံစားမှုလျစ်လျူဟုခေါ်တွင်ရာဖြစ်တယ်။ သင်အတိတ်ဖို့စိတ်ခံစားမှုကို attachment မဆိုမျိုးခံစားကြသည်မဟုတ်လျှင်အခြေခံအားဖြင့်, အမှန်ချိန်းတွေ့ဘို့အဆင်သင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားပါ။
3 ။ သငျသညျမင်ျဂလာနှင့်တစ်ဦးအကြီးအအချိန်ရှိခြင်းဖြစ်ကြသည်။
ဤအချိန်နှင့်တကွကြွလာသောအောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသေးတီထွင်ခဲ့တယ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အချိန်အားလုံးအနာပျောက်စေတော်မူ၏သတိရပါ။ သငျသညျတော့ဘူးစိုးရိမ်မဝမ်းနည်းမရှိကြပေ။ သင်သည်သင်၏ပွူ၏ကုမ္ပဏီ၌ကြီးစွာသောအချိန်ရှိခြင်းကိုခံစားလူတိုင်းရယ်မောစေပြက်လုံး crack ။ သငျသညျအတူတူခံစားနေတယ်ဆိုရင်, သင်ချိန်းတွေ့ဘို့ဒါဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
4 ။ သငျသညျစိတ်ခံစားမှုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ယခုသင်သည်သင်၏အတိတ်နှင့်အတူတစ်ပြင်စိတ်ခံစားမှုလျစ်လျူရှိသည်နှင့်သင်အတိတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသမျှတို့သည်အကြွင်းအကျန်ကနေကိုယ့်ကိုကိုယ် unshackled ကြပြီ - ဒါကြောင့်ယနေ့အထိအချိန်ပါပဲ။ သကြားတတ်ကြဘူးချိန်းတွေ့ app ကို Download လုပ်ပါကကောငျးစှာအသုံးပွုပါစေ။
အထက်ဖော်ပြပါသင်ချိန်းတွေ့ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဖြစ်စေမတွက်နိုင်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အတိတ်ဆက်ဆံရေးမှကုစားခြင်းအချိန်နှင့်မကြာခဏအချိန်ကြာပါကသည်းခံခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ပါသည်။ ခုန်-start ရန်သင့်ချိန်းတွေ့ဘဝနိုင်ရန်အတွက်သင်တစ်ဦးကျန်းမာအတွေးအခေါ်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျချိန်းတွေ့ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီလျှင်ဘလော့ဂ်များ၏ content အဆုံးအဖြတ်အတွက်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အပေါ် Posted စက်တင်ဘာလ 3, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ Harsimran KaurTags: app ကိုချိန်းတွေ့သကြားတတ်ကြဘူး, သကြားတတ်ကြဘူးချိန်းတွေ့ site ကိုမှတ်ချက် Leave on Ways to Tell if You are Ready to Dive into The Dating Season Again
ကြွင်းသောအရာသကြား Mama မတ်ေတာသအခမဲ့သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌သို့မဟုတ်ရုံအိပ်ခန်းထဲမှာယေဘုယျအားဖြင့်အမွှေးအကြိုင်အမှုအရာကိုတက်မယ့်သကြားဓာတ်ကလေး / သကြားကောင်လေးတစ်ယောက်ရှာနေကြပါသည်လျှင်သင်ဖုံးလွှမ်းတယ်ထားပါတယ်စိတ်ချပါ! သင်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အိပ်ရာ၌သင်တို့ကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့သော်လည်းကောင်းတစ်ဦး 18 + သကြားကလေးယောက်ျားလေးကိုရှာရှာနေတဲ့သကြား mama မှန်လျှင်, သင်ပိုင်ခွင့်အရပျသို့ကွှလာပွီ။
ယောရှုယနေ့အထိတစ်ဦးအောင်မြင်သောသကြား mama ရှာဖွေနေသူတစ်ဦး 26 နှစ်အရွယ်သကြားကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူကအစားအလွန်အကျွံစိတ်ခံစားမှုအိတ်ကိုသူငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများအဟောင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးကုမ္ပဏီကိုပိုမိုနှစ်သက်သူကအကြောင်းရှက်မဟုတ်သူတစ်ဦးမာစတာကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအလွန်စွန့်စားခြင်းနှင့်အသစ်သောအတွေ့အကြုံများကိုရှာဖွေစူးစမ်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
သငျသညျဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်သို့မဟုတ်မဖွစျစေ, သင်တို့အဘို့တစ်တွင်းသကြားဓာတ်ကလေး / သကြားကောင်လေးလည်းမရှိ။ အမျိုးသားများအတွက်ယောက်ျားလေးများမျှကွဲပြားခြားနားနေတဲ့အမြိုးသမီးတနဲ့သကြားကိုရှေးခယျြအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ကျော်လွန်ပြီးကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျအဘယျသို့ထိုသူအချို့တို့သည်ချင်ကြခြင်းထက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရန်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင့်ထံမှအမှုအရာသင်ယူဖို့နှငျ့သငျတို့ကလုယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရနှင့်ပြန်လာအတွက်, သင်သည်သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ညီညွတ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သစ္စာရှိမှုခံယူပါလိမ့်မယ်ချင်တယ်။
သင့်ရဲ့ကောင်လေး-ကစားစရာများနှင့်အဖော်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေသောအလွန်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ sexy သကြားကလေးယောက်ျားလေးများထောင်ပေါင်းများစွာ၏သငျသညျဖြည့်ဆည်းရန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ကြိမ်နောက်တဖန်သင်၏မေတ္တာဘဝနုပျိုဖို့ဒါမှတိုက်ရိုက်ကြှနျုပျတို့၏ website ဒါမှမဟုတ် Android ကျော်သူတို့နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဓာတ်ပုံများဖလှယ်ယနေ့ Up ကို Sign Play စတိုးအပေါ် app ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်ကိုက်ညီခြင်း algorithm ကိုများနှင့်တိုးချဲ့ရှာဖွေရေးရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီနှငျ့သငျပင်ဗွီဒီယိုနှင့်အသံချက်တင် options များမှတဆင့်သူတို့ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမတိုင်မီအမည်ဝှက်သူတို့ကိုထွက်စစျဆေးနိုငျကွောငျးကိုသကြားယောက်ျားလေးများရန်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
သင်ပင် / ကဒီမှာ, သငျသညျ, sexy, သင်ကြိုက်နှစ်သက်နှင့်သင်ပျော်စရာ-မေတ္တာရှင်တာဝန်ရှိသည်, Dash ၏သမုဒ္ဒရာမှသင်၏ရွေးယူနိုင်ပါသည်သူသကြားယောက်ျားလေးများ / သကြားကလေးတွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်အဲဒီအကြောင်းအလေးပေးဖို့လိုပါတယ်နှင့်စေ့စေ့နားထောင်သကြားကလေးမပြုကြ သကြားယောက်ျားလေးများ။ သကြားချိန်းတွေ့၏ပတ်ဝန်းကျင်အဆက်မပြတ်ကြား Mama မတ်ေတာသအခမဲ့သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာသူတို့ကိုကိုထည့်လေ့မရှိ, ဖြစ်ပေါ်နေသောဒီတော့အစားနေ့လယ်စာစားပွဲသို့မဟုတ်ရှိုးမှာသကြားကလေးငယ် / သကြားယောက်ျားလေးများထုတ်ရှာကြံ၏စိတ်ဖိစီးမှုကတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်တင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 9, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ HSC - အဒ်မင်Tags: အစီအစဉ်များရှာကြံ, သကြားကလေး, သကြားယောက်ျားလေးများ, သကြား Mamaမှတ်ချက် Leave on Sugar Mamas Seeking Sugar Babies / Sugar Boys
အဟောင်းမိန်းမနှင့်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ထွက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပါသလား ကောင်းပြီ, တကဒုတိယအတွေးကိုပေးပါကလုပ်နေတာမစတင်ပါဘူး။ သင်သည်သူတို့၏အစောပိုင်း 20s အတွက်ဖြစ်ကောင်းသူတို့, ရှေ့၌သင်တို့အသက်တာ၌အငယ်အမြိုးသမီးမြားရက်စွဲပါကြပေလိမ့်မည်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ရက်စွဲများ၏ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးမဟုတ်အတွေးအခေါ်တွေ၏, သင်စိတ်ပျက်တက်အဆုံးသတ်ကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့သူတို့အစောပိုင်း 20s အားလုံးကိုအမျိုးသမီးတွေရင့်ကျက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့၏ကိစ္စ, တစ်အတွေးအခေါ်တွေ၏ရင့်ကျက်အသက်အရွယ်အတူပါလာပါဘူး - ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံကို။ ရာစကားပြောသောကြောင့်အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့နုပျိုနှမများထက်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မ brainer ဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့လူတို့သညျအဘို့အတတ်မျှမေးစရာရှိပါတယ်။ ဤ blog-post ကိုကတည်းကအကြောင်း - အသက်ကြီးအမျိုးသမီးများချိန်းတွေ့ - ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပိုမိုပြောဆိုကြကုန်အံ့။
သင်ရုံသကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ကြလိမ့်မယ်နှင့်မပါလျှင်, သင်သေချာသင်ဤဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းပြုရသောအခါဤ website မှမှတ်ပုံတင်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို, ဆက်စပ်သို့ငုပ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းမယ့်ပါစေနှင့်အဟောင်းအမြိုးသမီးတချိန်းတွေ့ပိုပြီးပျော်စရာသည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။
သူမ၏ငယ်ရွယ်အစ်မတွေမတူဘဲ, သူမကလိုလားသောအရာကိုသိတော်မူ၏။ သူမသည်အပေါငျးတို့သအဖိုးတန်သင်ခန်းစာများမှတဆင့်သူမ၏ယခင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ခဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤကိစ်စတှငျသူမ Self-အားဖျက်ဆီးခြင်းစိတ်ထဲဂိမ်းတွေဟာဘယ်လောက်များနှင့်မလိုအပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ သငျသညျသူမ၏ woo ရန်အဘို့အဒါဟာအများကြီးယူမထားဘူး။ ဒါကြောင့်အောက်မေ့ခြင်းနှင့်သင်အမျိုးသမီးငယ်ဆွဲဆောင်ဖို့သုံးပြီးခဲ့ကြသူအပေါငျးတို့ညစ်ပတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်ကွက်သုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
အခုတော့သင်ကအဆင်မပြေမှုများထဲကလာနှင့်သင့် touchscreen ကပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းနှိပ် start နဲ့သကြားတတ်ကြဘူး app ကို download မတိုင်မီ - ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်အကြီးအကဲများသင်တို့အဘို့အတက်ပါတယ်။ သူမသည်သငျသညျရပ်မသွားပါဘူး။ သူမသည်သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်ဘဏ္ဍာရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများမှာသူတို့ဘဝအတွက်အသည်းအသန်နေသောယောက်ျားဆီသို့ဦးတည်ရေးဆွဲခံရဖို့ချစ်ကြတယ်။ သငျသညျ (လိုက်စားသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်) တစ်ဦးလိုက်စားပေါ်တွင်သင်၏မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတညျဆောကျခဲ့လျှင်ဒါ, သငျသညျသူမ၏အလိုအရှိဆုံးစာရင်းထဲတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ပြုသောဖြစ်ခြင်းနှင့်အချို့မျိုးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်။ သငျသညျသငျ၌ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးတွေကိုဖော်ကျူးဆိုပါကသင်သည်သင်၏လက်နက်သို့သူမ၏ယူဘို့အများကြီးယူမှာမဟုတ်ဘူး။
သူမသည်သူမ၏အသက်တာ၌လိုလားသိကတည်းကသင်ဝေါဟာရများမှမရောက်မှီကစဉ်းစားတွေးခေါ်တာမလိုအပ်ပါဘူး, သင်သည်လုံခြုံစွာကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်။ သကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုက်ဟာသူတို့ရဲ့နုပျို counterparts တွေကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လိုအသက်ကြီးအမျိုးသမီးများ profile များကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သေချာသင်ကြင်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ဖျောပွပါစေ။
အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 9, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ Harsimran KaurTags: သကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုက်မှတ်ချက် Leave on Reasons Why You Need To Date An Older Woman
သငျသညျ Whatsapp အပေါ်တစ်ဦးတောင်အာဖရိကသကြား mama နှငျ့ရငျးနှီးချိတ်ဆက်မှုအတွက်ရှာကြသည်ပါသလား?
ကျွန်တော်တို့သည်လှပသော luscious, ချစ်ခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှု, ခမ်းနားထည်ဝါစွာလက်ဆောင်များနှင့်သင်တို့ရှေ့မှကြုံတွေ့ဖူးဘူးအိပ်ခန်းလုပ်ဆောင်ချက်မျိုးနှင့်တကွသင်ရေချိုးမည်သူ Whatsapp အပေါ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတောင်အာဖရိကသကြား Mama အားဖြင့်သင်တို့ကိုတက်လင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်။
မြို့သူမြို့သားအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့အချိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သူသည်ဒါဗန်ကနေတွေ့ဆုံ Yvonne ။ သူမသည် 34 ဖြစ်ပြီးသူမနှင့်အတူသူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှဝေအပေါ်သူမ၏ပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်သူတစ်ဦးချောမောနှင့်ရင်ခုန်စရာလုလင်ကိုရှာဖွေနေ။
သငျသညျသူနှငျ့အတူ 100% စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူမ၏ယုံကြည်မှုအပျနှံမထားလျှင်, သင်သည်ဤလှပကြွယ်ဝတဲ့သကြားမေမေနေ့တိုင်းသင်သည်ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်ဘယ်လောက်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်သူမ၏စောင့်ရှောက်ပါ!
သငျသညျသူမ၏သင်သည်အချိန်မီဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ထစ်-အခမဲ့ဖမ်း-up, ချတ်များအတွက်ချင်ဘယ်အချိန်မဆိုရောက်ရှိသူလည်းမရှိဘဲသင်တို့ဆီသို့မင့်နဲ့တူမေတ္တာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူသူမ၏ရေချိုးနိုငျသောကွောငျ့အဘယ်အရာကိုမျှ WhatsApp ပေါ်တွင်သင်၏တောင်အာဖရိကသကြား mama တိုက်ရိုက် access ကိုရှိခြင်း beats မည်သည့်အလယ်အလတ်လူကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်။
အကြှနျုပျတို့သညျပေးနိုငျကဲ့သို့သင်တို့သာတစ်ခုခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်ချောမောကောင်လေးကြောင်းမေတ္တာနှင့်ပျော်စရာအမျိုးအစားကိုရှာနေကြသူချမ်းသာကြွယ်ဝအမျိုးသမီးများ၏သင့်ရဲ့ရွေးယူနိုငျသောအနေဖြင့်မျိုးစုံတောင်အာဖရိကသကြားမေ Whatsapp အုပ်စုများဒါအတွက်တူးဖော်ခြင်းအတွက်မှာအားလုံးအချိန်မဖြုန်းတီးကြ WhatsApp အပေါ်တောင်အာဖရိကသကြားမေမေနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရနှင့်၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ဖုန်းနံပါတ်ရ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp အုပ်စုများအပေါ်တောင်အာဖရိကသကြားမေမေအများစုဟာလေးနက်ဆက်ဆံရေး၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာသင်သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြစ်စေကွာရှင်းမှတဆင့်ပါပြီ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့သင်သည်သင်၏သစ္စာရှိမှု, အချိန်, အာရုံစူးစိုက်မှု, ချစ်ခြင်းလဲလှယ်မှအကျိုးနိုငျသောကံကြမ္မာနှင့်အတူမုဆိုးမများနှင့်ကျန်ရစ်နေကြပါတယ်။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 27, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ HSC - အဒ်မင်Tags: အိပ်ခန်းအရေးယူ, မေမေချစ်ခြင်းမေတ္တာ, တောင်အာဖရိက, သကြား, mummy ချိန်းတွေ့, sugardatingမှတ်ချက် Leave on South African Sugar Mummy Whatsapp
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပေါင်းသင်းပေမယ့်အချည်းနှီးအပြန်မေတ္တာ, လက်ဆောင်တွေ, ငွေကြေးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုတရစလတံ့သောသကြား Mama နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်အာဖရိကသကြား mama ချိန်းတွေ့ platform ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းအတွက်အချိန်မဖြုန်းတီး။
က Pretoria ထံမှတွေ့ဆုံ Megan ။ သူမအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သည်မဟုတ်လော Megan ချမ်းသာတဲ့, ပျော်စရာမေတ္တာရှင်, သူ့အလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မေတ္တာရှင်၏သူမ၏ဝန်ပေးရရိုးရိုးသားသားနှင့်ရင်ခုန်စရာလုလင်ကိုရှာသောငါတို့ platform ပေါ်တွင်အထွက်တောင်အာဖရိကသကြား mama ဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည်သူမအလွန်အဆင်သင့်နှင့်သူမ၏နှလုံးအနိုင်ရရှိသူကံကောင်းကောင်လေးတွင်ငွေသောက်သောက်သုံးဖြုန်းဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်တယ်, ဒီမှာဆုကြေးငွေအစွန်အဖျားင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်: သင်အလုံအလောက်ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းသူမ၏စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ကြသည်လျှင်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူကပင်အိမ်ထောင်မှာအဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, ။
သငျသညျ Megan တူသောတောင်အာဖရိကသကြား Mama ပျော်ရွှင်ထိုသို့ဆုခခြံခံရအောင်ချစ်ကြလျှင်, သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာကြပြီ။
တောင်အာဖရိကသကြား mama ချိန်းတွေ့အတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်ခြင်း။
ကျနော်တို့သာနေ့စွဲဖို့အကောင်းဆုံးအာဖရိကတောင်ဘက်သကြား mama အားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားသောအဖြစ်ယခုအထိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမ၏နှငျ့သငျ့ဆကျဆံရေး၏အောင်မြင်မှုကိုမှာဒါမှမဟုတ်ရှုံးနိမ်နောက်ဆုံးမှာသင်တို့အပေါ်မှာမူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်အာဖရိကသကြား mama ချိန်းတွေ့ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးရှာနေတောင်အာဖရိကမှာကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအနေဖြင့်အများအပြားလှပကြွယ်ဝတဲ့သကြားရှိပါတယ်။
တောင်အာဖရိကသကြား mama ချိန်းတွေ့ပေါ်တွင်သင်၏အိပ်မက်၏သကြား mama ၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရစေရန်, သငျသညျတောင်အာဖရိကသကြား Mama မတ်ေတာအတှကျရှာနေအမျိုးသမီးတွေပေါင်းသင်းနိုင်ပါတယ်လျောက်ပတ်ဖြစ်ကြောင်းသိထားရပေမည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသင်၏မေတ္တာထားဖို့လိုရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့သငျသညျအမှိုက်ကဲ့သို့အပြုမူဆက်ဆံအချို့အသေးစားမိန်းကလေးများမရှိကြပေ။
လေးစားမှုနှင့်သင့်တောင်အာဖရိကသကြား mama နှင့်သင့်ဆုလာဘ်ကိုလှိမ့်ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှသစ္စာခံနေပါ။ သင့်ရဲ့သကြား mama ချိန်းတွေ့ကြီးမားတဲ့အလှည့်ကိုချွတ်အခါကတခြားမိန်းကလေးနှင့်အတူလှည့်ပတ်လိမ်သတိရပါ။ သူမ cheat ၏နည်းနည်းလေးနိမိတ်လက္ခဏာကိုအာရုံခံလျှင်, ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့်သင်သူမ၏ဆုံးရှုံးသူကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမျှသောမည်, ဖြောင့်သူမနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူမ၏စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ရှုပ်ထွေးမကျင့်။ သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင်သင်သူမ၏နှင့်အတူရှိသောအခါ, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မနေပါနဲ့။ တိုတိုမှာတော့ကိုယ့်မေတ္တာ, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အိပ်ခန်းလုပ်ဆောင်ချက်ဝန်နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သူမ၏ရေချိုး။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 27, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ HSC - အဒ်မင်Tags: သင်တို့ကဲ့သို့ချိန်းတွေ့ယောက်ျား, တောင်အာဖရိက, သကြား Mama, အလွန်ကြွယ်ဝသောမှတ်ချက် Leave တောင်အာဖရိကသကြားမေချိန်းတွေ့အပေါ်
သငျသညျကို Facebook ပေါ်တွင်သင်၏အိပ်မက်၏တောင်အာဖရိကသကြား, mummy ကိုမတှေ့နိုငျသူကားအဘယ်သူပြောပါတယ်?
ကောင်းပြီ, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်များစွာသောချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုံတောင်အာဖရိကသကြား Mama နည်းတူအများကြီးသူတို့ချင်တယ်အဖြစ်သူတို့ကိုမချစ်ရန်, ရိုးသားရင်ခုန်စရာနှင့်ချောမောလုလင်တို့သည်ရှာနေ Facebook ပေါ်မှာရှိပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသို့မဟုတ်သူမမှားပါကြောင်းကိုလူတဦးပြောပြ ကိုခစျြရလိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်ကိုချစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဂရုစိုက်မယ်လို့ Facebook ပေါ်မှာတစ်တောင်အာဖရိကသကြား mama ရှာဖွေနေတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်သိရန်သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ Facebook တွင်အများအပြားအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတောင်အာဖရိကသကြား Mama ခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်အထီးကျန်ဆန်မှသူတို့ကိုကယ်တင်အမြဲအိပ်ရာမှာသူတို့ကိုကျေနပ်ဖို့လုလင်တို့သည်ပြည့်များအတွက်မြျှောအပေါ်လည်းကြောင့်တကယ်တော့ခံစားချက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။
Kiki Facebook ပေါ်မှာတစ်တောင်အာဖရိကသကြား mama ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်အနောက်တိုင်းကိပ်အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်သူမ၏နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသွားလာရန်အတော်လေးကောင်းသော-ရှာဖွေနေ, ရင်ခုန်စရာနှင့်ရိုးသားလုလင်ကိုရှာဖွေနေသည်။
သူမသည်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲအားလုံးတိုင်းပြည်အပေါ်အများအပြားက high-class ကိုဖြစ်ရပ်များနှင့်သူမသင်ကံကောင်းကောင်လေးလျှင်သင်တို့အပေါ်မှာသူမ၏ပိုက်ဆံဖြုန်းအကြောင်းကိုရှက်မဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျကို Facebook ပေါ်တွင်စုံလင်သောတောင်အာဖရိကသကြား mama ကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိသေးသင်သည်အဘယ်ကြောင့်အံ့သြနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ချဉ်းကပ်လမ်းကိုအကြောင်းတစ်ခုခုသို့မဟုတ်သောသူတို့ကိုပယ်ချပြီးကြောင်းသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်တဲ့အဆီအခွင့်အလမ်းရှိကွောငျးကိုသိရန်လိုအပ် ။
စတင်သည်သင်တစ်ဦးကယ့်ကိုအကောင်းနှင့်တည်မြဲပထမဦးဆုံးအစှဲပါစေနှင့်သင် creepy အဖြစ်ပယ်မလာကြဘူးဆိုတာသေချာရမယ်လို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်အာဖရိကသကြား Mama သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်ပြသပေမယ့်သင်အမြဲ classy စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အေးမြကကစားသင့်ပါတယ်အကျိုးစီးပွားတန်ဖိုးထားတယ်။
လူ့စေနှင့်လည်းသင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံဝန် post ရန်သင့်ပရိုဖိုင်းကို tweaks ။ သင်တို့သည်ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်အပေါင်းတို့သည်လမ်းရိုးသားနေဖို့လျှင်, သင်အချိန်မအတွက် Facebook ကမှသင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်တောင်အာဖရိကသကြား mama ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ငါတို့သည်လည်း Facebook ပေါ်မှာတောင်အာဖရိကသကြား Mama နှင့်အတူငါးမျှားသင်တက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 27, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ HSC - အဒ်မင်Tags: facebook, fb အုပ်စုတစ်စု, mummy, သကြားကလေး, သကြား, mummyမှတ်ချက် Leave on South African Sugar Mummy Facebook
တောင်အာဖရိကသကြား Mama ဖုန်းနံပါတ်များ
သင့်ရဲ့တောင်အာဖရိကသကြား mama ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထားရှိခြင်းသည်လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်အပေါင်းတို့နှင့်အချိန်များတွင်သူမနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့ရန် surest နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှန်မှန်အာရုံကိုချစ်သောသူများနှင့်လှပချမ်းသာကြွယ်ဝတောင်အာဖရိကသကြား Mama မျှကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အင်တာနက်ကိုကျော်ချတ်နှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပျော်စရာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်နေစဉ်, သင့်ရဲ့ baritone စကားသံကိုသူမခန္ဓာကိုယ်မှ kinky သောအရာတို့ကိုမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့တောင်အာဖရိကသကြား mama ကယ့်ကိုလိုလားရုံနှောင်းပိုင်းတွင်ညအချိန်တွင်ဖုန်းကျော်ကသင့်ရဲ့အသံကိုကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်များရှိပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အတောမသတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးလှပသကြား Mama ၏ဖုန်းနံပါတ်၏ search အတွက်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ရှာဖွေအစားကနေရှေးခယျြဖို့အတှကျတောင်အာဖရိကသကြား Mama '' ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ပြည့်စုံကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စရှိသည်။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကို join အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အိပ်မက်ဖြည့်ဆည်း, သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်တောင်အာဖရိကသကြား mama ၏ဖုန်းနံပါတ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့။
ဟယ်လင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စပေါ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တောင်အာဖရိကသကြား Mama တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်တွင်အခြေစိုက်နှင့်တောင်အာဖရိကကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်အကိုင်းအခက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီဇိုင်နာအဝတ်အစားလိုင်းပြေးနေသည်။ ဟယ်လင်ရင်ခုန်စရာဖြစ်ပြီးဟာသတစ်ဥာဏ်ကောင်းသောသူတစ်ခုတည်းလုလင်ကိုရှာဖွေနေသည်။ သူမသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့နှင့်အတူသူမ၏အရေအတွက်ကိုဝေမျှဖို့လိုလားပေမယ့်သင်ကသူမ၏နှလုံးအနိုင်ရအိပ်ရာအတွက်ကောင်းသောသူဖြစ်ရမည်အလေးအနက်ဆိုသည်နှင့်သူမသငျသညျတောင်အာဖရိကမှာလက်ရှိအချိန်တွင်မဟုတ်ရင်တောင်သင့်ရဲ့ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဘုတ်ပေါ်မှာတစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့်ဟယ်လင်နှင့်အခြားတောင်အာဖရိကသကြား Mama နှင့်အတူချိတ်ဆက်ခြင်းကိတ်မုန့်တဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတိတ်ထဲမှာအများအပြားသကြားယောက်ျားလေးများမှတောင်အာဖရိကသကြား Mama '' ဖုန်းနံပါတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထွက်ပေးပြီကျနော်တို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကယ်နှုတ်တော်မူသောကွောငျ့အမှုအရာ၎င်းတို့အကြားတကယ်ကိုကောင်းစွာထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။
သင်သည်သင်၏တောင်အာဖရိကသကြား mama နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးအတွက်အောင်မြင်ဖို့သေချာစေရန်, အမြဲသူမ၏နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ interaction ကအတွက်ရေးစပ်နှင့်ရယ်စရာခံရဖို့သတိရပါ။ အမြဲတမ်းလေးစားမှုနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေထိုင်ရန်နှင့်သူမ၏ချဉ်းကပ်လာသောအခါ creepy အဖြစ်ပယ်မလာကြဘူး။ သငျသညျဤအမှုကိုနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ပေးအပေါငျးတို့သညျအခွားအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါလျှင်, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌သင့်ရဲ့တောင်အာဖရိကသကြား mama နှင့်သင်၏အိပ်မက်နေထိုင်နေပါလိမ့်မယ်, ငါ့ကိုခိုလှုံပါ၏။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 27, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ HSC - အဒ်မင်Tags: ဖုန်းနံပါတ်, တောင်အာဖရိက, သကြားကလေး, သကြား mamaမှတ်ချက် Leave on South African Sugar Mama Phone Numbers
သငျသညျသကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာလာပါနှင့် cherishing ကွန်နက်ရှင်ကိုရှာဖွေနေပါသလား? ဟုတ်ကဲ့ အကယ်. သင်မေ့လျော့ချင်ဘယ်တော့မှသော Cardinal စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအချို့ထုတ်စစ်ဆေးချင်ပေလိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့, အဲဒီမှာသင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူထံမှရနိုင်ကောင်းသောချိန်းတွေ့အကြံပြုချက်များများများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် "don'ts" ဟုအဆိုပါအရေးအပါဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဤ blog သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ် "လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဘယျသို့" နှင့် ပတ်သက်. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကြံပေးချက်များအချို့အကြောင်းသင့်အလင်းပါလိမ့်မယ်။ ဘလော့ဂ်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆိုပါအကြံပြုချက်များကိုသင်ဆက်ဆက်စူးစမ်းလေ့လာချင်ဘယ်တော့မှအကြောင်း, ချိန်းတွေ့များ၏အရုပ်ဆိုးဘက်အကြောင်းကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
1 ။ သင့်ရဲ့ဖြစ်သူဆောင်ကြဉ်းမနေပါနဲ့
သငျသညျကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လည်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်မယ်လို့အကြီးမားဆုံးအမှား၏ One ကိုသင်၏ဟောင်းဖော်ပြသည်။ သင်၏နေ့စွဲတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အလှည့်ပယ်ပါပဲ။ သူမသည်, သင်တန်း, လှလှပပဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းဝယ်ထားပြီးကိုယ့်ကိုသင်အထင်ကြီးဖို့စျေးအကြီးဆုံးရေမွှေး၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ဟောင်းများ၏ sob ပုံပြင်ဆောင်ခဲ့ - ရက်စွဲ၏ကျန်းမာအရှိန်အဟုန်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ဒါဟာအစဦး၌အလင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ cheery အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ မလုပျ - ဒါကြောင့်စကားဝိုင်းမှာသင့်ရဲ့ဖြစ်သူဆောင်ခဲ့ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ tipsy ဖြစ်ခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ
အခြေအနေကလွှဲမရှောင်သာပါလျှင်အရက်သောက်, သို့သော်, ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲစဉ်အတွင်းအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ကြဉ်ရပါမည် - ပိုကောင်းအနည်းဆုံးနှင့်အတူသွားပါ။ တစ်ဦးအရက်သောက်၏အလွန်အကျွံတစ်ဦးဆိုးအခြေအနေမှာပစ်လိုက်နဲ့သင်ကပြန်ပစ်အဆုံးသတ်စေလိမ့်မည်။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းပထမဦးဆုံးစှဲပြီးခဲ့သည့်အထင်အမြင်သည်။ သငျသညျဆက်ဆက်သင်အရက်တွေဟာအစာကြေမနိုင်ထားတဲ့စှဲဖော်ပြရန်ချင်ကြပါဘူး။ အဲဒီမှာအမျိုးသမီးတွေများများသကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေဖြစ်ကြ၏နှငျ့သငျဆက်ဆက်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးချင်ကြဘူး။ ဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့အခွအေနေကြောင်းတူသောသူတဦးကိုရှောင်ကြဉ်။
3 ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုသိပ်ထုတ်ဖေါ်မနေပါနဲ့
အစဉ်အဆက်ကြားလျှင်, "သင်ရေငတ်သူတို့ကိုစောင့်ခြင်းနှင့်သူတို့ပိုပြီးပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်"? အခုတော့ကြောင့်သင်သည်သင်၏နေ့စွဲနှင့်အတူဂိမ်းကစားရန်လိုအပ်ပါတယ်မဆိုလိုပါ။ သို့သော်သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုအရာအားလုံးထုတ်ဖော်ရန်မလိုချင်လိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကောင်းနားထောင်သူဖြစ်ခြင်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဆီသို့ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ကသာသင့်ရဲ့နေ့စွဲအကြောင်းကိုသိစေဒါပေမယ့်လည်းသင်အခြားနေ့စွဲသတ်မှတ်ထားချင်ဖြစ်စေမထားတဲ့စိတ်ကူး, ပေးသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
4 ။ ဖုန်းကို အသုံးပြု. ရှောင်ကြဉ်ပါ
သငျသညျကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏လူမှုမီဒီယာအပေါ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းတိုင်းတစ်ခုတည်းအကြောင်းကြားစာစစ်ဆေးနေနေတယ်ဆိုရင်, ကသင့်ရဲ့နေ့စွဲကိုသင်စိတ်ဝင်စားမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုတစ်ဦးအထင်အမြင်ပေးလိမ့်မယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့သကြားတတ်ကြဘူးကထွက်မထိုင်နဲ့နောက်တဖန်သင်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းဘယ်တော့မှမည်, ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဘေးဖယ်သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ် connection ကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်အချို့သောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောစကားပြောဆိုမှုအတွက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒါဟာ သာ. ကောင်း၏။
5 ။ အရမ်းသင့်ရဲ့အဝတ်အစားနှင့်အတူထုတ်ဖော်မယူကြ
သငျသညျဆက်ဆက်သင်ရုံအားကစားရုံထဲကရတယ်နေကြသည်တူခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။ သင်၌လွယ်ကူသောခံစားရတစ်ခုခုဝတ်ဆင်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာဝတ်စားဆင်ယင်။ ဒါဟာသင်သကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုက်ကနေကောက်ယူခဲ့ကြပြီးသင်ကဆက်ဆက်သင့်ရဲ့သကြားတတ်ကြဘူးရဲ့စိတ်ထဲပေါ်ကောင်းတစ်ဦး Imprint စွန့်ခွာချင်သောပထမဦးဆုံးနေ့စွဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးထှနျး၏အလွန်အကျွံသင်အတန်ငယ်ရိပ်ရတဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင်အဘို့အလေးနက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုတစ်ဦးအထင်အမြင်ပေးလိမ့်မယ်။
ဒါကရှင်းပါတယ်ဘုံသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ဆင်ခြင်များနှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိစဉ်းစားလျှင်မူကား, သင်တို့သည်ဤသငျသညျရှောငျရှားရမည်ဖြစ်သည်သောအရာဖြစ်ကြ၏သောအချက်ထံသို့လာကြ၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လူများအများစုသောသူတို့ကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ရက်စွဲပေါ်တွင်သူတို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးကြောင်းရယ်စရာပါပဲ။ ဘလော့ဂ်အတွက်ဖော်ပြခဲ့သော Cardinal စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်, သင်သည်အောင်မြင်သောရက်စွဲကိုရယူကူညီပေးသည်။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 13, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ Harsimran KaurTags: သကြားတတ်ကြဘူး, သကြားတတ်ကြဘူးက်ဘ်ဆိုက်မှတ်ချက် Leave on How To Avoid Ruining Your Date: An Important Guide
တစ်ဦးကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့နှလုံးသားရန်သန့်ရှင်းသောဘုရား Grail - တစ်ဦးကအနှစ်ချုပ်
သငျသညျအစဉျအမွဲကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အမှန်တကယ်သူမ၏လူကိုစလေိုကွောငျးသောအရာကိုအံ့ဩပြီလော အဆိုပါထုတ်လုပ်သူရက်ရက်ရောရောဤလှပသောသတ္တဝါကိုမိမိနှလုံးသွန်းလောင်းလေ၏။ သူကလူတအမှန်တကယ်နှောမြောသမျှသောသူတို့အားအရည်အသွေးတွေကို embedded သိရသည်။ တစ်ဦးရောဂါကိုငြိမ်းစေသော - သူမကတစ်ဦးပွားတစ်ဦးလှူတစ်ဦးအသည်းအသန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့, မိတ်ဖက်အပေါင်းတို့နှင့်အထက်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှရှိတ်စပီးယားလှလှပပ Marie Claire နှင့်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအခြားအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တစည်းပုံဖော်။
သငျသညျသကြား mama ချိန်းတွေ့ site ပေါ်တွင်တစ်ဦး Soul ကွန်နက်ရှင်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအမြိုးသမီးတ woo ဖို့ဘယ်လိုသိကြရပေမည်။ ဤတွင်ဤ blog post တွင်, အကပ်တရုပ်တေးဂီတမဟာဗျူဟာနှင့်သူမ၏နှလုံးအနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေထဲကတခြို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သင်ဤရေးသားမှု-up ကနေသွားပြုတစ်ချိန်ကသင်, တစ်ဦးချိန်းတွေ့အထူးကုကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်အာရုံစိုက်ကအများဆုံးပါစေ။
လူအများစုသူတို့ကိုကြည့်ဘယ်လောက်မှအများကြီးအာရုံစိုက်မရကြဘူး။ သို့သျောထိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ သူမသည်အနီးကပ်သင်ကြည့်ရှုသည့်နှင့်သင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းအသေးစိတ်အာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ်နှင့်သင့်မုတ်ဆိတ်ကိုပွငျဆငျရရပညာရှိဖြစ်၏။ တစ်ဦးကောင်းမွှေးကိုရှေးခယျြနှငျ့သငျကောင်းသောအနံ့သေချာပါစေ။ ရှိလျှင်လည်း, ထိုညစ်ပတ်လက်သည်းအဘို့အစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်သန့်ရှင်းရေး၏လူယောက်ျားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အလူစိမ်းတွေ့ဆုံမှကြွလာသောအခါပိုပြီးမကြာခဏမထက်, ကအန္တရာယ်တစ်ခုနှင့်အဆင့်အထိပါဝင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူမဟာကာလ၏အစအဦးမှာသင်တို့အဖို့သူစိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းပေါ်သော်လည်း, ရုပ်ပုံသင်သည်နှစ်ကြိမ်ထက် ပို. ရင်းနှီးသောဖြစ်လာအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရက်စွဲတစ်ခုအဘို့သူမ၏ထွက်မမေးခင်, တချို့အချိန် ယူ. စာသားရှိမရှိသို့မဟုတ်နှုတ်စကားဝိုင်းမှာသူမ၏ပါဝင်ပတ်သက်ရ။ သင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုသို့နှင့်သင်တစ်ဦးထားကြသောပြောင်းရွှေ့စေနှင့်သူမ၏ထွက်ကိုမေးလိမ့်မည်ဟုအချို့သောဖြစ်ကြောင်းသိကြတစ်ချိန်ကသူမ၏ယူပါ။
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူမလောက်မရှိတဲ့ပူရဲ့ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်သူမ၏စိတ်ကို-numbing အော်ဂဇင်ပေးဖို့သငျ့စိတျထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရှိသည်။ စောင့်ဆိုင်း .. တစ်စက္ကန့်အဘို့သင့်သည်မြင်းကိုင်ထားပါ။ ဘာမှမတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ကိုမျှော်လင့်မထားပါနဲ့။ အပြင်, တစ်ဦးပဏာမယူနှင့်သူမ၏သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဝါသနာအတွက်ပါဝင်ကြကုန်အံ့။ တစ်ဦးမျက်လုံးချင်း Make မှာအားလုံးအပူတပြင်းပြုမူကြပါဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့, သင်ဂိုးသွင်းရန်သင့်အခွင့်အလမ်းရကြလိမ့်မည်သင်တို့မူကားအရာခပ်သိမ်းကိုဖျက်ဆီးဖို့နဲ့မွမှေုနျ့၌ရှုံးနိမ့်ရချင်မဟုတ်လျှင်, haphazardly တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့စေပါဘူး။
သငျသညျဆက်ဆက်သူမ၏ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်လုံခြုံဟုခံစားရချင်တယ်။ သူမသည် decided အရပ်ပေါ်မှာရောက်ရှိလာမယ့်လျှင်ကိစ္စများအတွက်သူမ၏မေးပါနှင့်အတည်ပြုပါ။ ကိုသတိရပါ, သင့်ကိုပထမဆုံးဦးစားပေးသင့်ရဲ့အမျိုးသမီးလုံခြုံတယ်လို့ခံစားမိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင်နှစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ရက်စွဲများစဉ်အတွင်းသီးခြားစီမောင်းရမည်ဟုအရေးကြီးပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူမလုံခြုံစိတ်ချစွာအိမ်ပြန်ရောက်ရှိလျှင်သူမ၏မခေါ်နဲ့အတည်ပြုဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ သငျသညျဂရုတစိုက်အရာအားလုံးနောက်တော်သို့လိုက်နဲ့အမြော်အမြင်ရှိရှိခြေလှမ်းတိုင်းကွပ်မျက်ခံရကြလျှင်, သင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအောင်မြင်စွာချပြီ။
ချိန်းတွေ့ပျော်စရာနှငျ့သငျဖြစ်စေမနှစ်ဦးကိုအလိုတော်ညှိတက်ကိုသိနှင့်တစ်လျှောက်တွင် get ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကအရေးအကြီးဆုံးကတော့တဦးတည်းဖြစ်၏။ သကြား mama ချိန်းတွေ့ site ကိုတစ်ဦးစိတ်ဝိညာဉ်ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်ရှာနေအမျိုးသမီးများ၏မရေမတွက်နိုင်သော profile များကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါပေါ်တယ်သင်သည်သင်၏ preference ကိုနှုန်းအဖြစ်အစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးထားပါတယ်။ တစ်ရေး-Up ၏ဤအပိုင်းအစမျှော်လင့်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏သကြား mama နဲ့ Soul connection ကိုအောင်ကူညီပေးပါမည်။
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 12, 2018 စက်တင်ဘာလ 21, 2018 စာရေးသူ Harsimran KaurTags: သကြား mama ချိန်းတွေ့, သကြား mama ချိန်းတွေ့ site ကိုမှတ်ချက် Leave on Holy Grail To A Woman’s Heart – A Synopsis
စော်ကားသော WordPress ကိုစွမ်းအားဖြင့်